बिष्णुको सासूआमा थुनिएपछी घर बाहिर आमा र दिदिको यस्तो खुलासा ! दाइजो को सट्टा नगद चाहिन्छ (भिडियो) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/बिष्णुको सासूआमा थुनिएपछी घर बाहिर आमा र दिदिको यस्तो खुलासा ! दाइजो को सट्टा नगद चाहिन्छ (भिडियो)
यसै बीच मृतक बिष्णु बरालकी आमाको टोली छोरीको घरमा पुगेकी छन । उनीहरु छोरीको सासुससुरा र ज्वाईसंग केहि प्रश्न सोध्न त्यहाँ पुगेकी हुन् । उनिसंगै सैयौ गाउलेहरु पनि त्यहाँ पुगेका छन । सारा गाउलेको दवाव पछी बिष्णुको सासूआमा र फुपूलाई पनि पक्राउ गरेको छ । उनिहरु पक्राउ परेपछि बिष्णुको परिवारले मिडियामा दाइजो बारे यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन ।